दशगजा क्षेत्रमा नेपाली सीमापारीका भारतीयहरुले बनाउन लागेको बाँध नेपाल तिरका जनताले भत्काउन खोजेपछि झडप भयो । दुबै तिरका केही मानिसहरू घाइते भए । घाईते नेपालीहरूको तस्वीर बीर योद्धाको रूपमा नेपालका पत्रपत्रिका, संचार माध्यमहरूमा प्रस्तुत गरियो । भर्खरै नेपाली राजनीतिमा छाएको स्वाभिमानको मुद्दालाई यस घटनाले निकै हौस्याएको छ । तिलाठी तिरका जनताले भारतीय अतिक्रमणका खिलाफमा सीमा रक्षकका रूपमा लडाई लडे; यही सूरतालमा यस घटनाको चित्रण एवं चर्चा आउने समयमा भैरहने छ । अहिले यस बिषयलाई माध्यम बनाएर राजधानी काठमांडूको सडकमा भारतका बिरोधमा कार्यक्रमहरू हुन शुरू भैसकोको छ । वास्तवमा यी सब सतही कुरा हुन् ।
सप्तरीमा यौटा रमाईलो प्रसंगको चर्चा हुने गरेको छ । खाडो नदीले हरेक बर्ष नै सप्तरीको तिलाठी लगायतका दक्षिणी क्षेत्रहरूलाई डुवानमा पार्ने गर्छ । खाडोको बौलाहा हुने पानीको भेल तोपा, महदेवा, इनरूवा, सखुवा हुदै तिलाठीलाई डुबानमा पार्दै कुनौली तिर बग्दछ । यो आजको कुरो मात्र हैन, दशकौं देखि यस्तै हुदै आएको छ । नेपालबाट यसरी बगी आउने पानीको प्रलयकारी प्रवाहबाट जोगिन भारतपट्टीको कुनौलीका मानिसहरू सदैव बच्ने उपाय खोज्दै आएका छन । यसरी कुनौलीबासीहरूले प्रायस: हरेक बर्ष नै दशगज्जामा बाँध बनाउने गर्दछन । अब यसबाट जोगिन नेपालपट्टीका तिलाठी लगायत क्षेत्रका मानिसहरूको मुख्य काम हुने गर्दछ ।
यसका लागि सप्तरीको सि.डी.ओ. कार्यालयमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धारको यौटा सानो रकमको बजेट हुन्थ्यो । कहिलेकाँही यसमा जि.बि.स.ले पनि केही रकम थप्ने गर्दथ्यो । ठूलो बर्षा भएको बेला, बाढीले उत्पात गर्न लाग्दा, खाडो र महुली आदिको पानीले तिलाठी, रमपुरा-मल्हनीया, ईनरुवा-सखुवा, वेलही-तिलाठी आदि गाँउहरूलाई डुवानमा पार्न लाग्दा सप्तरीका सि.डी.ओ. ले तिलाठी तिरका मानिसहरूलाई बोलाएर त्यो बजेटको केही रकम दिन्थ्यो-रक्सी मासु खान र कुनौलीको त्यो बाँध कटान गर्नका लागि । यो पैसा र रकम लिन हुलका हुल मानिसहरू आउथें । रकम लिन्थे, राती भोज भतेर गर्थे र ठूलो बाढी आएको मौकापारी राती राती हुलका हुलमा गई कुनौलीबालाले दिनरात गरी बनाएको बाँधलाई भत्काई दिन्थे । हरेक बर्ष नै यस कामको सिलसिलामा दुबै तिरका मानिसहरूका बीच हात हालाहाल हुन्थ्यो । झैझगडा हुन्थ्यो । बढीको पानी बगेर जान्थ्यो । स्थिति यतिकै साम्य हुन्थ्यो । त्यहां राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरो, भारतीय अतिक्रमणको कुरो कहिल्यै उठ्दैन्थ्यो । हाल तिलाठीका देवनारायण यादवको बडो चर्चा छ । यस पटकको झडपमा यिनी घाईते भए । पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमा यिनको रगताम्य तस्वीर भाइरल भएको छ । यिनी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उ बेला सप्तरी जि.बि.स.का सदस्य थिए । यिनीहरूपनि माथी चर्चा गरिएको बाँध भत्काउने काममा सरिक हुन्थे । यस पटकपनि यो समस्या जनजीविकाको समस्या नै हुन भन्ठानेर सरिक भएका हुन । अहिले भने यिनी नेपाल मुलुकप्रति मधेसी राष्ट्रवादीताको प्रतीक भएका छन् । यद्यपि यो एक संयोग मात्र हुन ।
२) चुरे र महाभारतबाट निस्कने खाडो, त्रियुगा,महुली र सुन्दरी नदी अर्ध चन्द्रकारमा पूर्व तिर फर्कदै कोशीमा प्रवेश गर्ने गरेको हो । यी नदीहरू कोशी ब्यारेजको पश्चिमी तटबन्धलाई छेडेर कोशीमा पस्ने गरेको हो । यसलाई बाटो दिनका लागि उक्त बाँधमा ढोका बेगरको पुल र केही सुलेज गेटहरू बनाईएको थियो । अहिले कोशी छिर्नु पहिले नै यी सबै नदीको प्रवाह रोकिएको छ । यसरी नै कोशी नदीले सुन्सरी तर्फ अर्थात पूर्वी छेउबाट बाटो बनाएकोले पश्चिमी भाग बालुवा थुप्रेर अग्लो भएको छ । यस्तो अवस्थामा यी सबैको पानी सोझै दक्षिण तर्फ बाटो बनाई वैरवा, पोर्ताहा, भारदह, सखुवा, हनुमाननगर, ईनरूवा र अर्को तर्फ राजबिराज, पकरी, तोपा, कट्टी बर्साइन, कोईलाडीहरू हुदै तिलाठी भई कुनौली तर्फ निकास खोज्छ । नदीले यो बाटो खोज्छ खोज्छ ।
५) अहिलेको जस्तो अवस्था नआओस भनी सचेतता राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकायहरूको हो । जनताको हो । यस तर्फबाट जिम्मेवारीको निर्वाह भएको छैन । उदाहरणको लागि राजमार्ग भै भारदहबाट बरमझिया तिर लाग्नुस् । महुली नदीको पुल पर्छ । यो पुलबाट पूर्व तिर १ कि.मी. नपुग्दै नदीको प्रवाह खेतीका कारणले पुरै रोकिएको देखिन्छ । त्यत्रो खहरे महुली नदीको पानी त्यहांबाट कोशी तर्फ जानै सक्दैन । अब बरमझियाबाट कंचनपुर तिर बढनोस् । बरमझिया पार नहुदै सुन्दरी नदीको पुल पर्छ । पुलको पूर्व तिर नदीको भागलाई धान खेत बनाईएको छ । पश्चिम तिर बसोबास बनाईएको छ । त्यत्रो सुन्दरीको पानी कता बग्ने ?
यी काम नगरेर कुनौली र तिलाठीमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको जीत खोज्नु र भारतीय अतिक्रमणको खिलाफमा प्रतिरोध देख्नु मुर्खहरूको मुर्खता बाहेक अरू केही होईन ।